Amethyst ခရမ်းရောင်သောကျောက်အဓိပ္ပာယ်ကို။ အသစ်ပြောင်းလဲခြင်း 2021 - မဟာဗီဒီယို
သဘာဝ amethyst သည်ခရမ်းရောင်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသော crystalline quartz ဖြစ်သည်။ သဘာဝရောင်ခြည်ကြောင့်၎င်းခရမ်းရောင်အရောင်ကိုရရှိနိုင်သည် သံ အညစ်အကြေးများ။ အကူးအပြောင်းဒြပ်စင်အရောအနှောများနှင့်တွဲဖက်။ အချို့ကိစ္စများတွင်။
သဲလွန်စဒြပ်စင်၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှုပ်ထွေးသောကြည်လင်ရာဇမတ်ကွက်အစားထိုးမှု။ ထို့အပြင်ဓာတ်သတ္တု၏မာကျောမှုသည်လင်းကျောက်ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်လက်ဝတ်ရတနာများအတွက်စျေးသက်သာသောစျေးနှုန်းနှင့်သင့်တော်သည်။
Renaissance ကာလအတွင်းသည်ကျောက်မျက်သည်နှိမ့်ချမှုနှင့်ကျိုးနွံမှုအတွက်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ခေတ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးတွင်အစွမ်းထက်။ ကြွယ်ဝသောarchကရာဇ်များသည်ကျောက်သလင်းကိုတော်ဝင်မင်းသမီး၏သင်္ကေတအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြပြီးအချို့သည်ဗြိတိသျှသရဖူရတနာကိုအလှဆင်ကြသည်။
Rough rom Kampong Thom, ကမ္ဘောဒီးယား
Amethyst ကျောက်မျက်မူလတန်းအရောင်များကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အလင်းပန်းရောင်ခရမ်းရောင်မှနက်ရှိုင်းသောခရမ်းရောင်သို့။ အနီရောင်နှင့်အပြာရောင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်ဒုတိယအရောင်များကိုပြသနိုင်သည်။ ဆိုက်ဘေးရီးယား၊ သီရိလင်္ကာ၊ ဘရာဇီးနှင့်အာရှတို့သည်အကောင်းဆုံးမျိုးကွဲများ၏သတ္တုတွင်းရင်းမြစ်များဖြစ်သည်။ နက်ရှိုင်းသော Siberian စံပြတန်းအမည်ဖြစ်တယ်။
၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ခရမ်းရောင်အရောင် ၇၅ မှ ၈၀% ရှိပြီး ၁၅ မှ ၂၀% အပြာရှိသည်။ အလင်းအရင်းအမြစ်ပေါ်မူတည်သည်။ အစိမ်းရောင်လင်းကျောက် ထို့အပြင်မှားယွင်းစွာဟုခေါ်သည် အစိမ်းရောင်နီလာခရမ်းရောင်။ ကျောက်တုံးအတွက်သင့်တော်သောအမည်မဟုတ်ပါ မှန်ကန်သောဝေါဟာရဖြစ်သည် prasiolite။ အခြားအမည်များ အစိမ်းရောင်လင်းကျောက် များမှာ vermarine or ထုံး citrine.
သဘာဝကြည်လင်၏အရောင်ကိုမကြာခဏထွက်ချထားသည်။ ဒဏ်ချက်ကနေကြည်လင်၏နောက်ဆုံးမျက်နှာများမှအပြိုင်။ ဒါ့အပြင် lapidary ၏အနုပညာအတွက်တ ဦး တည်းရှုထောင့်ကိုမှန်ကန်သောကျောက်ဖြတ်တောက်ပါဝင်သည်။ အရောင်ခွဲခြင်းသည်အပြီးသတ်ကျောက်မျက်၏အသံကိုတစ်သားတည်းဖြစ်စေသည်။ ကျောက်တုံးတွင်ခရမ်းရောင်အရောင်ပါးလွှာသောမျက်နှာပြင်လွှာသာရှိသည်။ အရောင်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးခက်ခဲဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက်စေသည်။
အရောင်သည်ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းရှိဆီလီကွန်အတွက် trivalent သံ (Fe3 +) ကိုဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်အစားထိုးခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော ionic အချင်းဝက်၏သဲလွန်စဒြပ်စင်၏ရှေ့တော်၌။ အသွင်သဏ္ဌာန်ပြောင်းခြင်းကြောင့်သဘာဝသလင်းကျောက်အရောင်သည်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
၎င်းဒြပ်စင်သည်သံအာရုံစူးစိုက်မှုနိမ့်ကျသည့်တိုင်အောင်၎င်းကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သဘာဝကျောက်တုံးသည်အနီရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်ရှိ dichroic ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကုသ amethyst အဝါရောင် - လိမ္မော်ရောင်လှည့်။ ၎င်းသည်အဝါရောင် - အညိုရောင်သို့လည်းကောင်း၊ အဲဒါနဲ့တူနိုင်တယ် citrineဒါပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့မတူပဲ၎င်း၏ dichroism ရှုံး citrine.
မှောင်မိုက်သော amethyst စျေးသည်များသောအားဖြင့်ပိုမိုစျေးကြီးပြီးအလင်း amethyst ထက် ပို၍ နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်သည်။
Rough rom Ratanakiri, ကမ္ဘောဒီးယား
အမျိုးအစား: silicate ဓာတ်သတ္တု
ဖော်မြူလာစီလီကာ (silicon dioxide, SiO2)
Crystal စနစ်: Trigonal
Crystal အတန်းအစား: Trapezohedra
အရောင်: ခရမ်းရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ ခရမ်းရောင်
Crystal အလေ့အထ - ၆ ဘက်ပါသော Prism သည် ၆ ခုပါပိရမစ်ဖြင့်အဆုံးသတ်သည်
အမြွှာ - Dauphine ဥပဒေ၊ ဘရာဇီးဥပဒေနှင့်ဂျပန်ဥပဒေ
Mohs ၏မာကျောမှုမှာ ၇ မှအောက်အထိရှိသည်
တောက်ပ: ဖန်ထည် / glassy
Streak: White က
Diaphaneity: စဖို့ Transparent
တိကျသောဆွဲငင်အား - ၂.၆၅ စဉ်ဆက်မပြတ်၊ မစင်ကြယ်သောမျိုးကွဲအတွက် variable ကို
အမြင်ဂုဏ်သတ္တိများ: Uniaxial (+)
တုံ့ပြန်မှုအညွှန်းကိန်း: n = 1.543-1.553 / nε = 1.552-1.554
Pleochroism: ခရမ်းရောင် / အနီရင့်သောအလယ်အလတ်ရှိသည်
အရည်ပျော်မှတ်: 1650 ± 75 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Amethyst ကျောက်သလင်းကျောက်၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဂုဏ်သတ္တိများသည်စွမ်းအင်ကုသမှုနှင့် Chakra ဟန်ချက်ညီမှုတို့တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများနှင့်အတူကူညီရန်စွမ်းအားများရှိသည်။
၎င်းသည်ဝိညာဏကာကွယ်မှုနှင့်သန့်စင်သောကျောက်တုံးဖြစ်ပြီးအပျက်သဘောစွမ်းအင်များ၏လွှမ်းမိုးမှုများနှင့်တွဲဖက်မှုများကိုသန့်ရှင်းစေပြီးခန္ဓာကိုယ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသောဝိညာဉ်ရေးအလင်း၏ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်နိမ့်ကျခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ဘူမိဗေဒစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တို့ကိုကာကွယ်ရန်အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘယ်လို amethyst ဝတ်ထားသင်၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲနိုင်သလဲ
ကျောက်သလင်းသည်ကျွန်ုပ်စာရင်း၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိရမည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်ကဏ္ field ကိုကာကွယ်သည့်အမြင့်ဆုံးကြိမ်နှုန်းကိုသယ်ဆောင်သည်။
သင်၏ကြည်လင်သောသရဖူ Chakra သည်သင်၏စိတ်ကိုအေးဆေးငြိမ်သက်မှုရှိစေရန်လုပ်ဆောင်သည်။ သို့မှသာသင်သည်ပျော်ရွှင်မှုခံစားရခြင်းမှသင့်ကိုနောက်ပြန်ဆွဲနေသောမည်သည့်ပိတ်ဆို့မှုများကိုမဆိုကုသနိုင်သည်။ မင်းရဲ့သတ္တမ Chakra ဟာခရမ်းရောင်ဖြစ်ပြီးမင်းခေါင်းထိပ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်သရဖူ Chakra လို့လူသိများတယ်။
ဒဏ္ာရီ။ amethyste ၏ဇာတ်လမ်း
Amethyste ဟာငယ်ရွယ်ပြီးလှပသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Diana နတ်ဘုရားမကိုကိုးကွယ်သူဖြစ်တယ်။ ဒိုင်ယာနာသည်သူမအားကျားများထံမှအကာအကွယ်ပေးရန် Amethyste ကိုစင်ကြယ်သောပုံဆောင်ခဲလင်းကျောက်ရုပ်တုအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Dionysus သည်လှပသောရုပ်တု၏မျက်မှောက်၌ဝိုင်မျက်ရည်များကျခဲ့ရသည်။
ဘုရားသခင့်မျက်ရည်များကလင်းကျောက်ကိုခရမ်းရောင်ဆိုးဆေးဖြစ်စေပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိသောကျောက်မျက်ကိုဖြစ်စေသည်။ Diana သည်ရောမလနတ်ဘုရားမဖြစ်ပြီးတိရိစ္ဆာန်များကိုရှာဖွေသည်။
ထိုကာကွယ်မှုများအနက်လူသိများသောတစ်ခုမှာမူးယစ်ခြင်းကိုတားဆီးရန် amethyst ၏ရည်မှန်းချက်ပါဝါဖြစ်သည်။ Bacchus နှင့်ပတ်သက်သောနောက်ထပ်ဒဏ္myာရီတစ်ခုမှာဤယုံကြည်ချက်ကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုသည်။
ဉာဏ်နှင့်စိတ်ခံစားမှုများကိုဟန်ချက်ညီစေရန်လူသိများသော Aries, Aquarius နှင့် Pisces ဆိုင်းဘုတ်များအတွက်အုတ်မြစ်။ လ ဖေဖော်ဝါရီလ.
လက်ဝတ်ရတနာအတွက် amethyst ကိုသုံးတယ်။
ကျောက်မျက်ရတနာ၊ cabochons၊ ပုတီး၊ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲများနှင့်လက်ဝတ်ရတနာနှင့်အဆင်တန်ဆာများအသုံးပြုရန်အတွက်အခြားပစ္စည်းများစွာကိုထုတ်လုပ်သည်။ ကျောက်သလင်းသည် Mohs ၏မာကျောမှု ၇ ခုရှိပြီးကွဲကွဲပြားပြားမကျပါ။
ကျောက်မျက်ရတနာသည်စေ့စပ်လက်စွပ်၊ လည်ဆွဲ၊ ပုတီးဆွဲ၊ ဆွဲကြိုး၊ လက်ကောက်နှင့်အခြားလက် ၀ တ်ရတနာများတွင်အသုံးပြုရန်လုံလောက်သည်။
endocrine function ကိုတိုးတက်အောင်။
ကျောက်သလင်းကျောက်၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဂုဏ်သတ္တိများအပြင်၊ တရားအားထုတ်ခြင်းအတွက်များစွာအသုံးဝင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ၎င်း၏တည်ရှိမှုကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိယဉ်ကျေးမှုများစွာတွင်စိတ်ကိုကုသနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်၊ ထို့ကြောင့်နှစ်များတစ်လျှောက်ဤကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်သောလူတို့နှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လူကြိုက်များခဲ့သည်။
ဒီကျောက်တုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာပြသတဲ့အရောင်ဖြစ်တယ်။ အဆင့်အမြင့်ဆုံးကျောက်မျက်ရတနာသည်အလွန်ရှားပါးပြီး၎င်းကိုတွေ့ရှိသောအခါ၎င်းင်း၏တန်ဖိုးသည်စုဆောင်းသူများ၏လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးသောနီလာသို့မဟုတ်ပတ္တမြားထက်အဆပေါင်းများစွာသက်သာသည်။
amethyst နှင့် fluorite တို့၏ခြားနားချက်ကိုသင်မည်သို့ပြောနိုင်သနည်း။
၎င်းမှောင်မိုက်သောခရမ်းရောင်သို့မဟုတ်ခရမ်းရောင်ပုံဆောင်ခဲများသည်လင်းကျောက်နှင့်အလွယ်တကူရောထွေးနိုင်သည်။ သို့သော် fluorite ၏ထူးခြားသောပုံဆောင်ခဲပုံသဏ္,ာန်၊ ကွဲပြားမှုရှိသည့်လေယာဉ်လေးစင်းနှင့်၎င်း၏ဆွေမျိုးပျော့ပျောင်းမှုနှစ်ခုကိုခွဲခြားနိုင်သည်။ Fluorite သည် octahedrons များဖြစ်ပေါ်ရန်လမ်းညွှန်လေးခု၌ပြီးပြည့်စုံသောခွဲစိတ်မှုကိုပြသသည်။
၎င်းကိုပူနွေးသောဆပ်ပြာဖြင့်သန့်စင်ပေးနိုင်သည်။ Ultrasonic သန့်ရှင်းရေးသမားများသည်များသောအားဖြင့်ကျောက်တုံးများကိုအရောင်ကျိုးခြင်းသို့မဟုတ်အရောင်တင်ခြင်းဖြင့်ဆေးကြောထားသောသို့မဟုတ်ရှားပါးသောဖြစ်ရပ်များ မှလွဲ၍ လုံခြုံသည်။ ရေနွေးငွေ့သန့်ရှင်းရေးကိုမထောက်ခံပါ။ အပူကိုမခံပါနှင့်။
အစိမ်းရောင် amethyst ကဘာလဲ?
Prasioliteစိမ်းလန်းသောလင်းကျောက်၊ အစိမ်းရောင် amethyst သို့မဟုတ် vermarine ဟုလည်းလူသိများသည်အစိမ်းရောင်အမျိုးမျိုးဖြစ်သော quartz၊ silikat mineral ဓာတုဗေဒ silicon dioxide ဖြစ်သည်။ ကျောက်တုံးအများစုသည်အပူပေးသည့်အခါအဝါရောင်သို့မဟုတ်လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်လာသည် citrineသို့သော်ကုသသောအခါအချို့သောကျောက်မျက်စိမ်းလန်းသောပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။
ကျောက်တုံးသည် Mohs စကေး (၇) ရှိ၍ ခိုင်ခံ့မှုရှိသဖြင့်လက်ဝတ်ရတနာအားလုံးအတွက်သင့်လျော်သည်။ ၀ တ်ဆင်သူသည်၎င်း၏ခိုင်မာသောအကန့်အသတ်ကိုနားလည်သရွေ့ကွင်းနှင့်လည်ဆွဲပါဝင်သည်။
၎င်းသည်အဖိုးတန်ကျောက်တုံးကြီးဖြစ်သည်။ ကျောက်မျက်ရတနာသိပ္ပံတွင်စိန်၊ ပတ္တမြား၊ နီလာနှင့်မြစသောကျောက်မျက်လေးမျိုးသာရှိသည်။
နီလာခရမ်းရောင် pair တစုံ 21.95 CT
နီလာခရမ်းရောင် 10.56 CT
နီလာခရမ်းရောင် 4.62 CT